पूर्वसभामुख महरा पुर्ख्यौली गाउँमा गोरु जोत्दै ! - muktikhabar
पूर्वसभामुख महरा पुर्ख्यौली गाउँमा गोरु जोत्दै !
मुक्तिखबर	काठमाण्डाैं	जेठ २६, २०७७
काठमाडौं । पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा पुर्ख्यौली गाउँ रोल्पा पुगेर बारी जोत्दै गरेको एउटा फोटो सार्वजनिक भएको छ। उनी अहिले खेतिपातीमा लागेका छन् ।
उनी तीन दिन अगाडि रोल्पा गएका थिए । खेतिपातीको समय सुरु भएकाले उनले पुर्ख्यौली गाउँ आएको बताएका छन्।
‘राजनीति गरेदेखि सधैं बाहिरको बाहिरै रहनुपर्यो, आफ्नो बारी जोत्ने मौका नै मिलेको थिएन,’ उनले भने, ‘अहिले खेतिपातीको कामका लागि परिवारका सबै सदस्य आफ्नो पुर्ख्यौली घर आएका छौं ।’
यो प्रकरणपछि महरा धेरैजसो समय आफू निर्वाचित भएको दाङ क्षेत्र नम्बर २ र आसपासका क्षेत्रमा कार्यकर्ता भेटघाटका लागि गइरहन्छन् । पछिल्लो पटक करिब एक साताअघि स्वास्थ्य सामग्रीहरु लिएर महरा दाङ गएका थिए । दाङबाट उनी तीन दिन अगाडि रोल्पा पुगेका हुन् ।
२६ जेठ २०७७, सोमवार १२:२५ बजे प्रकाशित
क्वारेन्टाइनले कोरोना भाइरस नियन्त्रण होइन झनै फैलायो, एकजना संक्रमितले सबैलाई संक्रमित बनाएर जान्छन् !